Induction Brazing Brass Studs kuCopper Pipes process Technology
Induction brazing mhezari emapipi emhangura
Iyo inogadzira ma coils ekushambadzira kwemaindasitiri.
DW-UHF-40KW Induction Brazing Maitiro - ma module maviri.
Zvinhu: Brass stud (saizi: 25mm dhayamita, 20 mm kukwirira)
Dambudziko guru panguva iyi kuburitsa kuburitsa nzira ndeyekuona kuti kugadzirwa kwekhoyili ndiyo inoita kuti nyanzvi inyatsoimisa nenzira kwayo. Iyo induction coil inofanira kubvumira iyo yechipiri Stud kuti ipfutirwe-isati yanyungudutswa yekutanga.
Kutanga, chikamu chemhangura chemagetsi chinokuvadzwa pane simbi yaimbove netochi yegasi nepo nzvimbo yakaenzana pakati pekutendeuka ichengetwa. Zvino, iyo yemhangura kutendeuka inodziyirwa padhuze netembiricha inodiwa uye nepo simba riripo, nyanzvi inofanirwa kuve nechokwadi chekuisa pamurume mhete yendarira nerin'i yekusimbisa panzvimbo yakatarwa. Munguva yekuita brazing, iyo induction coil iri kufamba nekumhanya kwe58 mm paminiti - 33 kW.
Kana simba rikawedzera, kumhanya kunochinja saizvozvo.
Yekukurumidza, yakachena uye yakachengeteka kuburitsa kusungurudza urongwa
Categories Technologies Tags mhangura dzendarira dzinoongorora, ndarira, kupenya mhangura dzendarira, bronze nendarira kusvika kune yendarira, High Frequency Brazing brass, induction brazer, kuburitswa kuburitsa mhangura, kuburitsa kusungurudza mhangura, kuburitsa kusungurudza mhangura, induction ichiona michina, induction brazing system, induction kuchenesa zvikamu Post navigation